Management - Chongqing Fangtong Animal Pharmaceutical Co., Ltd
UMnu Li Yangchun Professor
Waphumelela Veterinary College of University yaseMzantsi ngo-1981, ku-amayeza lwezilwanyana, utitshala zekholeji, ingcali lwezilwanyana, uye wabandakanyeka ekufundiseni, uphando, uphuhliso kunye nokuthengiswa ukususela 1982 Nguye umcebisi abaninzi amachiza lwezilwanyana amashishini kwiteknoloji intengiso. Ke yena umphathi jikelele kwisebe amayeza kunye isixhobo.
Tang Jianhua Professor / Tutor for Graduate
Waphumelela Veterinary College of University yaseMzantsi ngo-1985, ku-amayeza lwezilwanyana, ukuba uneminyaka engama-20 yamava nobungcali. Yena uyakwazi nokukhokela imveliso iziyobisi lwezilwanyana kunye nolawulo lomgangatho ngokwemfuneko ka GMP.
Umphathi Vice Jikelele
Fu Jin, International Business Engineer
Gruduated ukusuka Chinese amayeza zeMveli university of Chengdu, USokhemesti, esebenza Sichuan Drug Administration phakathi 1990-1994, ukufumana isihloko of International Business Engineer ngo-2005 ukususela Ministry of Commerce. Ngoku ke intloko Service International Inkampani 's.
Chen Jixuan Professor / Tutor -mali
Waphumelela Veterinary College of kwiYunivesithi yaseMzantsi, ku-Veterinary Medicine. Uye waba ungutitshala ikholaji enye kude kube ngoku. Ngamava iminyaka 25 obungcali, nguye onoxanduva lokulawula kwentengiso.
Umphathi QA umqondisi GMP
UMnu Fu Guocai pharmaceutist
Waphumelela Sichuan Intshayelelo kunye College Veterinary, ku-inzululwazi yamayeza, kunye iminyaka 9 ngolwazi kulawulo lomgangatho iziyobisi lwezilwanyana, aza kukwazi ukwenza umgwebo echanekileyo sijamelene neengxaki zolawulo lomgangatho amachiza lwezilwanyana.